Yini okufanele ugqoke izimbadada zase pink?
Izicathulo ze-pink ziyisicathulo esiqhakazile nesinomfazi kakhulu ehlobo. Izinhlobo eziningi ezihlukene kulolu hlu lobubala emashalofini ezitolo zezicathulo zihlaba umxhwele amafashini ngezinhlobonhlobo zazo. Kodwa izicathulo eziningi kakhulu ze-pink zilukhuni ukuzihlanganisa nezinto ezisekhabethe. Yini okufanele ugqoke izicathulo zombala onjalo?
Izicathulo zezinsikazi zama-pink
Izicathulo ze-pink ezinezithende eziphakeme zizobe zihlanganisa ukugqokisa emgqeni noma ebhulukwe. Futhi kulesi kit, ungagqoka izicathulo ze-pink ku-hairpin. Izicathulo ezisezintabeni zinezinhlobonhlobo eziningi. Kuphelele cishe noma iyiphi inhlanganisela: ibhulukwe, ama-shorts noma igqoke. Kodwa ngezingubo kanye nezingubo ezigqoke phansi, azibukeli ngokuvumelana. Izicathulo ze-pink esiteshini nazo kufanele zikhethwe ngokucophelela. Uma uhlela ukuwagqoka kaningi nge-sarafans kanye neziketi, khona-ke kufanele ukhethe ipulatifomu enembile nakakhulu. Ngokugqoka ngendwangu ungakhetha ipulatifomu enkulu.
Umbala omuhle kakhulu we-pink uzobukeka obuluhlaza. Into esemqoka kulolu chungechunge ukulandela umthetho owodwa: ubuluhlaza obuluhlaza obomvu obukhanyayo, futhi ngobumnene obomvana obuhlaza okwesibhakabhaka. Isibonelo, ingubo yokugqoka yezicathulo ezinombala eziluhlaza okwesibhakabhaka nesibhakabhaka esinezinkinobho ezinezesekeli ngezwi. Le ngubo ngeke ikuvumele ukuthi uhambe ungabonakali. Ama-tandems ajwayelekile nombala omnyama nomhlophe okumele awuthathe awunzima. I-pink engeyona ekhangayo ayivumelananga nemifanekiso ehlukahlukene yezimbali.
Kubheka i-pink enkulu ene-turquoise. Ukuhlanganisa okunjalo kulula kakhulu ukuhlanganisa. Kungaba njengezicathulo ze-turquoise, iketi noma ijazi elinama-pink izesekeli, kanye ne-blouse noma i-blouse enezimpawu ezimhlophe nezibomvu. Lezi izingubo zingahlanganiswa futhi zihlangane ngendlela ehlukile. Into eyinhloko ukunamathela ebhaleni ngesamba salokhu noma leso somthunzi. I-tandem efanayo i-pink ne-mandarin ne-carrot shades.
Ukubukeka okuthakazelisayo okumnandi kunama-pink aneziqephu ezihlukahlukene: kokubili ngaphansi kombala wezikhumba zezilwane, kanye ne-plant motifs. Into esemqoka akuyona ukuyiqeda ngenani lombala owodwa, umthunzi noma ukuphrinta.
Ukubopha kanjani umsikazi wesifazane?
I-crepe chiffon - uhlobo luni lwezindwangu?
Ungayithola kanjani isitayela sakho izingubo?
Izinhlobo zezitayela zokugqoka
Izingubo zesizwe zaseTatar
Indlela yokugqoka abesifazane baseFrance?
Ubucwebe besitayela se-Bohemian
Isitayela se-Grunge ezembatho
Imithetho yokuziphatha yamantombazane
Yini okufanele ugqoke amabhuthri enjoloba?
I-Cathedral yaseSan Miguel
Izihlalo zokhuni ezine-backback
Ukuntula i-Iron okunempilo - izimpawu kanye nokwelashwa
Ngingakhulelwa yini emva kokukhipha isisu?
Ifilimu ngokuphila kukaFreddie Mercury ngaphansi kwesongo sokuhluleka
I-Paris Hilton - umnikazi ojabule we-Chihuahua ngamadola ayizinkulungwane ezingu-8
Izingubo ezihle kakhulu ze-Evening 2013
Izembatho zokugqoka zezingane
Indlela yokukhipha i-pimple?
Sherri Hill - inkathi entsha yimuphi umcimbi!
Ukulungiswa Kokukhwabaniswa Kwokuthuthwa
Kungani uqala izingono zakho?
Isikhulu seNkosana uCharles Tara Palmer-Tomkinson sashona ngezimo ezingaqondakali
UNatalie Portman wasekela umyeni wakhe e-LA Dance Project Gala eLos Angeles